I-Manyane Resort - E-Pilanesberg National Park - iSun City Safari
E-Pilanesberg National Park - iSun City, eNingizimu Afrika
Izivakashi eziningi zijabulela i-safari eduze ne-Sun City ePilanesberg National Park, ikhaya lezinkulungwane zezilwane ezihlanganisa Ibhubesi, Ingwe, Ubhejane, Inkunzi nendlovu.
Izindawo zokubuka izithombe ze-Big Five nezinkomfa
Izinhlobo ezahlukene zokuhlala, zokudlela kanye nedamu
Kuningi ukubona nokukwenza endaweni ephephile eduze neSun City
I-Manyane Resort ihamba ngehora eli-2 ukusuka eGoli
Etholakale emaphethelweni omuhle, iPilanesberg National Park, i-Manyane Resort, ihlinzekela izivakashi ukuthi zifinyelele epaki elikhulu lesine elikhulu eNingizimu Afrika, ukuze lihambe safari eduze neSun City. Le ndawo enhle inemvelaphi ye-volcanic futhi ibamba cishe zonke izilwanyana ezincelisayo zaseNingizimu Afrika phakathi kwezinhlobo zasendle zasendle nezilwane ezingaphezu kuka-300.
I-Pilanesberg National Park yenziwe eduze ne-volcano yasendulo, engapheliyo eyisibonelo esiphelele kunazo zonke ze-alkaline ring complex and epakini yinto evelele yezinto eziphilayo. Le ndawo igcwele izingqimba ezintathu noma izindandatho zamagquma - ukwakheka kuvela ezigodini ezizungezile njengebhola.
Ukumboza kanye nendawo engamahektha angu-55 000, i-Pilanesberg National Park iyindawo efunwa kuyo indawo ye-Big Five safari ngaseSun City, okuyi-20 imizuzu yokuhamba. Ehlelwe esifundeni seBonjalo esibucayi esifundazweni saseNorth West, le paki yamemezelwa ngo-1979 futhi isuke ishintshe ngokuphawulekayo izindinganiso zomhlaba wonke ukugcina isikhathi eside kusukela ezinhlobonhlobo ezilahlekile.
Izivakashi eziningi ze-Resortane ziyakwazi ukujabulela imoto emibili yansuku zonke yemoto, ukushayela ebusuku, ukuhamba kwamahlathi kanye ne-air-balloon safaris ukukhuluma ngamaphuzu ambalwa. Izilwane zasendle eziningi zikhula ezindaweni ezihlukahlukene nokuboshwa. Ngaphandle kwe-Big Five, izivakashi zingabona izinhlobo ezihlukahlukene ezivamile nezinhlobo ezivamile, nezinhlobo zezilwane eziphilayo ezinjenge-hyena ebomvu emnyama, izinhlanzi ezihamba ngezinyawo, udonga olukhulu, kanye nesirafu, i-zebra, imvubu nengwenya.